Usuku: Disemba 4, 2019
I-Iyla Ngokukhishwa kwesethi yezitimela, okwesibili okuhleliwe ukulethwa kule nyanga, inani labagibeli be-YHT nsuku zonke, abayinkulungwane ye-22, kuhlelwa ukuthi lenyuswe lize lifinyelele ku-2020 ayinkulungwane ku-30 ne-2021 eyinkulungwane e-40. Üretim Production Germany [Okuningi ...]
I-Istanbul University izocasha abasebenzi bezemfundo; Imibhalo ehlobene noMthetho ebalwe i-2547, ekhishwa kwi-Official Gazette ye12.06.2018, ishicilelwe kumayunithi alandelayo e-University of Istanbul. [Okuningi ...]
Amalungu obuhlakani be-2547 azophinda aqashwe ngokuya ngemibhalo ehlobene noMthetho Wezemfundo Ephakeme kanye Nemigomo Yokuphakanyiswa Nokuqokwa Kwamalungu E-Faculty. Abavoti, i-68 Civil servants Law 657. [Okuningi ...]
IYunivesithi yaseBursa Uludağ izocasha abasebenzi bezemfundo; Ngokuhlinzekwa koMthetho Wemfundo Ephakeme obhalwe i-2547 kanye nemithethonqubo esekwe ngokwesisekelo salo mthetho, ukuzimisela kweSenethi leNyuvesi yethu kusungulwa ngabakwa [Okuningi ...]
Turkey yamalahle Isinqumo Law No. 399 kuncike isimo izivumelwano e wekuhlanganisa onjiniyela ukwenza. Ngokwemiphumela yokuhlolwa okubhaliwe nangomlomo, isilinganiso kanye neziqu zabasebenzi bonjiniyela abazosebenza kuchaziwe kwisikhangiso. Izicelo zimenyezelwe [Okuningi ...]
UMnyango Wezolimo Nezamahlathi ukhiphe isimemezelo esisha sokuqasha. UMnyango Wezolimo Nezamahlathi 25 Novemba no-09 ngo-December 2019 ukuqashwa kwabasebenzi [Okuningi ...]
I-8, ekilasini leGeneral Administrative Services ezosetshenziswa eHhovisi likaMongameli weBhodi Labaphathi Besikhwama soMnyango Wezimali Nezimali. Ukuthengwa kwe-15 Trainee Treasure Controller kubasebenzi abangasebenzi kwe-Trainee Treasure Controller ” [Okuningi ...]
Isibhedlela saseYozgat Bozok University noma amanye amayunithi azokhethwa yiRectorate, i-2018 Year KPSS (B group) ngokusekwerenki, i-657 / B Article 4 / 06 / 06 date and 1978 / 7 BKK [Okuningi ...]
Umthetho we-657 kwizisebenzi zikaHulumeni. I-Article X (i-Article B) ye-4 yango-06.06.1978 futhi ithathwe ku-Isinqumo 7 / 15754 [Okuningi ...]
IHhovisi likaMongameli Wezindaba Zenkolo enhlanganweni yesifundazwe; inani lezikhala ezikhonjiswe etafuleni ngesisekelo samaphoyinti we-2018 ne-2019 KPSS abasebenzi abathola isigaba sabo, isihloko, isimo sabo semfundo nenombolo. [Okuningi ...]
Ukuze uqashwe ngokugcwele eMarmara University Information Processing uMnyango, Izinkontileka Ezifika Emsebenzini Omkhulu Wokucwaninga Amayunithi Izikhungo Zomphakathi Nezinhlangano ezishicilelwe kwiGazethi Esemthethweni yango-31 / 12 / 2008 futhi yabalwa i-27097. [Okuningi ...]
Ukuchitshiyelwa Komthetho Wezisebenzi Zombango. I-657 ezoqashwa eNkantolo Ephakeme Yezikhalazo. I-Article X (B) ye-Article 4 / 06 / 06 yango-1978 / 7 Council of Minister [Okuningi ...]
INkantolo yama-Akhawunti izocasha izisebenzi ezinesivumelwano. Ngokwesimemezelo esishicilelwe ku-DPB, iNkantolo yama-Akhawunti izocasha abasebenzi phakathi kwe-29 Novemba ne-16 ngo-December 2019. Izisebenzi ezizoqashwa kabusha, i-TCA [Okuningi ...]
I-Tokat Gaziosmanpaşa University 2547 yabala Umthetho Wezemfundo Ephakeme kanye Nemigomo Yokukhuthaza kanye Nokuqokwa Kwabasebenzi Basezifundweni kanye ne-94 ngokuya Ngezidingo Zokusebenza kanye Nezinqubo Zokusebenza Zamalungu Ethimba LaseTokat Gaziosmanpaşa University [Okuningi ...]